#GVMeetup Karachi: Mahita Fianakaviana Amin’ny Toerana Tsy Ampoizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2013 22:06 GMT
Ao anatin'ny enina herinandro manaraka izahay dia manomana fihaonana mivantana (‘meetups’) notarihana sy nokarakarain'ny mpikambana ao amin'ny Global Voices, izay monina sy mahafantatra ireo vondro-piarahamonina any an-toerana any. Fijoroana vavolombelona nosoratan'i Ismail Vohra izay nanatrika ny fihaonana voalohany tao Karachi, Pakistan izy ity.
Araka ny fotoana mahazatra ny Pakistani mifamotoana moa dia tonga teo an-toerana atsasakadiny taoriana aho. Gaga aho fa efa nanomboka ilay fihaonana. Niditra mangina tao an'efitra aho, raha nisy resadresaka TED nalefa tamin'ny efijery goavana. Ny rangahy antsoina hoe ‘Ethan’ izay niresaka momba ny voambolana anglisy hafahafa tsy tsaroako izay, saingy tsaroako kosa fa niresaka ny fomba ahafahantsika mikirakira ny aterineto hiampitana (tetezana) izao tontolo izao.
Araka ny mety hahafantaranao azo moa, mahaliana ihany ny resadresaka amin'ny TED, ary tahaka izany ity iray ity. Miainga amin'ny fanolorana amin'ny lahatsary mampisy aigam-panahy tahaka izao mihoatra noho ny amin'ny PowerPoint izay tsy vitan'ny hoe manome aingam-panahy ahy ny hevitr'i Ethan fa mampientanentana ahy ihany koa ny tian'ny olon'ny Global Voices atao manaraka. Rehefa tapitra ny lahatsary (video), Dia nanonatny iray iray tamin'ireo mpanolotra raha misy olona afaka manazava amin'ny mpanatrika izay tonga tara (ao anatin'izany ny tenako) izay nitranga atsasakadiny lasa izay.
Isaorana tokoa ny fikmbanana politika sy mpiaro ny zo ao amin'ny Bolo Bhi tamin'ny nanomezany ny toerana hanatontosana ny fihaonana, sy ny tonian'ny GV Urdu Faisal Kapadia mbamin'ny mpanoratra GV Pakistan Sana Saleem, tamin'ny fanomanana ny fihaonana, niaraka tamin'i Eddie Avila sy ny ekipan'ny Rising Voices. Ny fihaonana manaraka moa dia notontosaina tao Cairo tamin'ny 16 Novambra.